Immisa ayaad ka ogtahay 10ka farshaxan ee ugu caansan adduunka?
Immisa ka mid ah 10-kan farshaxan ee aad ku ogtahay adduunka? Saddex cabbir ahaan, farshaxan (Sawir-gacmeedyo) waxay leeyihiin taariikh dheer iyo sooyaal iyo hanaan faneed hodan ah Marble, naxaas, alwaax iyo waxyaalo kale ayaa la xardhay, la xardhay, oo la xardhay si loo abuuro sawirro muuqaal ah oo la taaban karo oo farshaxan leh ...
Dibadbaxayaasha Boqortooyada Midowday oo jiidaya taallada ganacsigii addoonta ee qarnigii 17aad ee Bristol
LONDON - Taallo ganacsade addoon ah oo qarnigii 17-aad ka ganacsanayay magaalada Bristol ee koonfurta Ingiriiska ayaa waxaa jiiday dibad-baxayaal "Black Lives Matter" Axaddii. Muuqaalo laga soo duubay baraha bulshada ayaa muujinayay banaanbaxayaasha oo jeex jeexaya sawirka Edward Colston gogosha ay wadeen intii ay socdeen banaanbaxyada magaalada c ...
Mudaaharaadyo jinsiyadeed ka dib, taallooyin ayaa laga dumiyay Mareykanka
Guud ahaan Mareykanka, taallooyinka hoggaamiyaasha isbaheysiga iyo shaqsiyaad kale oo taariikhi ah oo xiriir la leh addoonsiga iyo dilka dadka u dhashay Mareykanka ayaa la duminayaa, la sumcad dilayaa, la burburinayaa, la rarayaa ama la saarayaa ka dib banaanbaxyo la xiriira dhimashadii George Floyd, oo ahaa nin madow, booliska. haynta May ...
Qoondaynta iyo Muhiimadda Naqshadaynta Bullze
Kuma nihin shisheeyayaal naxaas laga sameeyay farshaxanno dibi. Marar badan ayaan aragnay. Waxaa jira dibi caan ah oo caan ah oo loo yaqaan 'Wall Street' iyo meelo muuqaal qurxoon oo caan ah. Dibida loo yaqaan 'Pioneer bull' ayaa badanaa la arki karay maxaa yeelay xayawaankan noocan oo kale ah ayaa caan ku ah nolol maalmeedka, sidaa darteed waxaan nahay muuqaalka farshaxanka dibi ee naxaasta ah ma ahan mid aan muuqan ...
5-ta ugu sarreysa “farshaxannada fardaha” adduunka
Taalladii ugu yaabka badnayd-ee fardooleyda ee St. Wentzlas ee Jamhuuriyadda Czech Muddo ku dhow boqol sano, taallada St. Wentzlas ee ku taal St. WentzlasSquare ee Prague waxay ahayd hanka dadka dalka. Waa in la xuso boqorkii ugu horreeyay iyo mucjisooyinka Bohemia, St. Bacda ...
Naqshadeynta farshaxanka qurxinta
Sawir gacmeedku waa farshaxan farshaxan oo ay iska leedahay jardiinadu, saameynteeda, saameynteeda iyo khibradeeduna aad uga weyn tahay muuqaalka kale. Farshaxan si fiican loo qorsheeyay oo qurux badan waa sida luul ku jira qurxinta dhulka. Waa mid aad u fiican oo door muhiim ah ka ciyaara qurxinta deegaanka ...